/Blog/garari/Synephrine HCL Powder - Mafuta anopisa uye uremu hwekuwedzeredza
Posted on 11 / 25 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
Nhasi, chikamu chikuru chehuwandu hwevanhu chiri kutsvaga nzira dzekuchengetedza huremu hune hutano. Zvakanaka, pakati pavo vese, kushandiswa kwe Synephrine HCL powder ndiyo imwe yenzira dzakachengeteka kwazvo dzaungachengeta mafuta asina hutano aripo. Synephrine poda ndeye alkaloid kemikari kemikari iyo isingawanzo kuwanikwa. Icho chinhu chechisikigo chinowanikwa muzvirimwa senge zvinovava orenji, pakati pevamwe.
Iyo ndiyo yekutanga bioactive chinhu mune inovava maruva iyo kushandiswa kwayo kwakatanga shure sepakutanga se1500s. Saka chii chaizvo chaishandiswa? Munguva yakapfuura, uyu mashiripiti wekuwedzera wakashandiswa mukurapa kwezvirwere zvegastro sekugumburwa, kudzimbira, uye kusvotwa. Mune dzimwe nzvimbo dzenyika, inozivikanwa zvakare kuva inoshanda anticonvulsant pamwe nemushonga wekusarara uye kusagadzikana.
Nekuuya kwehunyanzvi, orenji inovava yaratidza kuve yakanyanya kubatsira pakurapa matambudziko emazuva ano kubva kuzvirwere zvinotapukira nehutachiona, zveshuwa, uye nematumbu. Kuziva nezvekuti chikamu chikuru cheyori inovava Synephrine HCL, inokupa chikonzero chekuti nei uine huwandu hwekurapa hunhu.
Synephrine's poda mamorekuru mamiriro akafanana neiyo ephedrine, inova yeimwe yeakanyanya mafuta-kupisa zvikamu. Zvisinei, Ephedrine haisisiri mumusika sekuwedzera kwekudya; saka, Synephrine ndiyo inonyanya kutsiva. Octamine ndeyeSynephrine's metabolite uye parizvino yave nemukurumbira nemafuta ayo-anopisa zvivakwa.
2. Synephrine HCL- Mechanism Yekuita
Synephrine inoshanda kuburikidza nekushandurwa kweiyo simba remuviri kugadzirwa. Inoita izvi nekukanganisa mashandiro anoita chiropa, zvinotungamira mukugadzirwa kwemazhinji ma enzymes uye zvakare ine basa rakakosha mukutungamira kwekugaya uye kugadzirwa kwesimba mumuviri. Tsvagiridzo yakaitwa yakaratidza kuti Synephrine HCL (5985-28-4);
Inhibits glucosidase uye amylase, ayo ma enzymes ane chekuita nekuchera kwemakaka akaomeswa. Nekuda kweizvozvo, hazvigone kuti panenge paine post-yekudya ropa spikes.
Iyo inowedzera kudya kweglucose mune mhasuru kuburikidza nekukurudzira kwe AMPK. Ndiwo enzyme ine basa rayo kunzwisisa manzwi mumasero uye kukurudzira kupisa kwemafuta. Uyezve, inowedzera shuga shuwa mukati memasero.
Synephrine inowedzera huwandu hweATP inowanikwa. Izvo zvinopa simba rakawanda rinodikanwa kubatsira kubatsira kwemakemikari muchiropa.
Izvo zvakare zvinodzivirira kushandurwa kweshuga kuita mafuta.
Inowedzera glucose uye glycogen kuputsika.
Synephrine isina simba activator ye alpha-1 uye alpha-2 adrenoreceptors. Iwo maviri mashandiro nekupindura kune adrenaline nekudaro kuwedzera imwe yeropa uye kurova kwemoyo. Naizvozvo, Synephrine 5985-28-4 haigone kukonzera kuwedzera mumoyo wako kana kuwedzerwa kweropa.
Ndiwo musiyano mukuru pakati pe ephedrine uye Synephrine 5985-28-4, sezvo ephedrine inozivikanwa kuimisa zvese alpha-1 uye alpha-2 adrenoreceptors zvine simba.
Synephrine HCL inosimudzirawo neuromedin U2 receptors. Aya mamorekuru ari mu hypothalamus uye ayo anowedzera kumuka.
Synephrine inoshanda nekumisa kugadzirwa kwe eotaxin-1. Ndiwo mamorekuru anonongedza eosinophil kuti aende kunzvimbo ine moto. Iyo zvakare inovhara iyo NADPH oxidase chiitiko, icho chinogadzirwa nema neutrophils uyezve, chichigadzira akawanda anogadzikana eoksijeni marudzi.
Kuburikidza nekudzikiswa kwe activation yeNF-kB, Synephrine inoderedza kuzvimba. Izvi zvinodaro nekuti kuwandisa kweNF-kB kunozivikanwa kuti kunokonzeresa kuzvirwere kunge psoriasis, chirwere chechipfuva, pamwe neasthma.
Synephrine inoshanda nekuvharira butyrylcholinesterase uye acetylcholinesterase enzymes, inokuvadza kuvarwere veAlzheimer.
3. Synephrine HCL Shandisa
(1) Synephrine HCL Yekudzikira Kurema
Synephrine ndiwo kuora kurasikirwa powder inoshanda munzira dzakawanda.
Sezvo chido chokudzvinyirira- Iwe uri rudzi rwemunhu anogara achibira here? Ndiri kureva, kunyangwe mushure mekudya chikafu chinorema, dumbu rako haritore nguva refu risati ratanga kubongomora uye kukumbira chimwe chinhu. Kunyange iwe ungade kuderedza uremu, iyi ndeimwe yematambudziko aungatarisana nawo. Neraki, izvi kuora kurasikirwa powder inodzvinyirira nzara uye kukurudzira kudya, ichiita kuti unzwe kuzere munguva pfupi.
Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kunamatira kune yako yekudya ine hutano sekurongwa uye kuderedza uremu zvakanyanya nesimba. Uye usati wazviona iwe, iwe unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchizviona.
(2) Synephrine HCL saMafuta Burner
Mafuta akawandisa haangove njodzi yehutano chete, asi zvinogona zvakare kukuita kuti utarisike. Kupisa mafuta kunouya nezvikomborero zvakakura, kusanganisira kukuita kuti urarame kwenguva yakareba. Neraki, kushandisa kweSynephrine HCL ndeimwe yemaitiro akaratidzirwa aunogona kushandisa kunyungudutsa mafuta emuviri. Heano maitiro ayo anokubatsira iwe kuzadzisa ichi chinangwa;
Wedzera mawero esimba panguva yekushanda chikamu
Iwe haufanire kusvika kune yekurovedza muviri uye unonzwa wakaneta uye wakarara; Synephrine akakuwana. Inoita sehuni nekukupa iwe nesimba rese raunoda kuti uve nechikamu chekurovedza muviri chinouraya. Mice dzinofambiswa ne Synephrine powder vanoonekwa kuti vakakwanisa kushambira kwenguva yakareba, vachiratidza kuti simba ravo rakawedzera.
Nekuvandudza masimba esimba, Synephrine inozivikanwa kusimudzira mashandiro emitambo zvakare. Iko kusanganiswa kwekuwedzera kwesimba rekushandisa kwemafuta uye kukurudzira kunosimudzira mashandiro uye kunowedzera huwandu hwezvibereko zvakawanikwa kubva kune ese aerobic uye anaerobic kurovedza muviri. Izvo zvinoita kuti ive yakanaka pre-Workout yekuwedzera uye a mafuta zvinopisa zvakare.
Chidzidzo chakaitwa pane varume gumi nevaviri chakaratidza kuti mushure mekutora uremu hwekurasikirwa hupfu makumi mana nemashanu maminitsi vasati varovedza muviri vakawedzera uremu hwavo hwekurema. Ivo zvakare vakakwanisa kuita zvimwe zvekudzokorora sekuenzaniswa ne placebo. Mukusanganiswa nefifeine, Synephrine yakawedzera zvinyorwa zve "yakanyanya squat repetitions.
Ndiwo maitiro ekutyora mafuta mumuviri. Izvo zviri nani zvinotsanangurwa se metabolism. Synephrine inoshanda nekuwedzera yako metabolic chiyero nekudaro ichiita kuti munhu apise mafuta nekukurumidza. Inotsanangura kuti nei kutora Synephrine kuchakuita kuti upise mamwe mafuta kubva apo metabolism painenge yakakwira, muviri wako ungangosvika kumafuta akachengetwa kuti uwane akawanda.
Tsvagiridzo yakaitwa pairi yakaratidza kuti nemwero mumwe chete we50mg, basal metabolic rate yakawedzera ne65 calories kwemaminetsi makumi manomwe neshanu anotevera. Pakasanganiswa nemamwe mamorekuru hesperidin uye naringin, iyo metabolic boost yakaonekwa ikakwira kune anopfuura zana nemakumi masere macalories. Makero akadaro emakoriori anopiswa nemaminitsi makumi maviri ekujairira.
Muswe kutora gukosi
Synephrine inoshanda nekuita kukurudzira kutora kweglucose nemabhonzo emabhonzo. Izvo zvinobatsira kupisa mafuta kuburikidza nekubviswa kweglucose yakawandisa kubva muropa system. Izvo zvinobatsirawo pakupa mhasuru nehuga iyo inoshandiswa zvine simba simba. Naizvozvo, kuwedzera intramuscular glucose kunoreva kukura kwemasuru uye kuwanda.
Iyo Synephrine HCL muyero unosiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe. Zvisinei, muyero wakaenzana se kuora kurasikirwa powder iri 100mg pazuva. Kutsvagisa, zvisinei, zvinoratidza kuti Synephrine HCL muyero we35mg inoshandawo. Iyo Synephrine HCL dosage haifanire kunge ichidarika 200mg muzuva kuti udzivise huturu.
Kana iri nguva yako yekutanga kuitora, tanga nemupimo wakaderera we 10-20mg kuti uongorore kutsungirira kwako. Kana iwe ukasatambura nemweya unokanganisa, unogona kuwedzera uwandu zvishoma nezvishoma. Usawedzere nguva yekupindirana kwemaawa anopfuura maviri kusvika mana, sezvo izvi zvichizounza kukuvadza kwakanyanya.
Yeiyo Synephrine yekuvaka muviri maitiro kana seanopisa mafuta, iwe unofanirwa kuona kuti iwe unotora chinhu chekutanga mangwanani uye gumi nemashanu kusvika makumi matatu maminetsi usati waekisesaiza. Zvinokurudzirwa kuti uzvitore nemvura.
Ipo vamwe vanhu vangangoda kutora Synephrine iri voga, vamwe vangangoda kuiisa. Unogona kuishandisa pamwe chete nehumwe hupfu hweupfu uye zvakare izvo zvinowedzera simba rako. Yohimbine inokwenenzverwa zvakanaka neSynephrine, kunyanya kana chinangwa chako chikuru chiri chekudzora huremu.
L-theanine iriwo sarudzo yakanaka sezvo ichibatanidza mushe pamwe chero inokurudzira. Basa rayo ndere kuturusa mhedzisiro uye kuwedzera basa rekuziva. White willow bark inogona zvakare kuverengerwa mune stack yayo synergistic mhedzisiro.
Caffeine inogadzirisawo yakanaka yekuisa mukati, mungave mune yayo senge yakachena anhydrous fomu kana kubva kune zvimwe zvinowanikwa guarana.
5. Tenga Synephrine HCL Online
Pasina kupokana, Synephrine HCL ndiyo inoera giraidhi yehuremu hweupfu. Inobatsira kudzora chishuwo chako kana iwe ukavavarira kudya zvishoma kana kudzikisira kutora zvisina kunaka kudya. Iwe unogona kunyange kusarudza kudzikisira kudya kwako ne Synephrine inowedzera kwemaawa makumi maviri nemana kana iwe uchida kupinda muchimiro nekukurumidza.
Zvakare, sezvinoonekwa mune chinyorwa, zvinokuchengeta iwe uine simba, izvo zvinobatsira kwazvo, kunyanya kana iwe uchida kushanda kunze uye wadya zvishoma. Kana iri nguva inotora kuti utore mukati, hautendi kuti mukati memaminetsi makumi matatu, uchave uchiona zvinoitika. Mhedzisiro iyi inogona kutora iwe kwemaawa maviri sezvo Synephrine hafu-hupenyu maawa maviri.
Kana ikashandiswa pamwe chete nechikafu chinonzwisisika uye kurovedza muviri, iwe uchaona iyo Synephrine kuvaka muviri uye kuonda kurasikirwa nemhedzisiro mukati memavhiki maviri ekushandisa. Kune chero munhu arikunetseka nekutapira, kudyisa, kana mumwe anonzwa sekunge anoda kubvisa mamwe mafuta kubva mumiviri yavo, ichi ndicho chibvumirano chaicho!
Mafuta mazhinji anopisa anozivikanwa kukuita kuti utambure nemabatiro, asi ungatenda here kuti Synephrine inopa izvi zvese pasina kuisa muviri wako panjodzi? Mazhinji Synephrine wongororo inotaurira zvidiki kune zero madhara uye hazvishamisi kukurumbira.
Iye zvino zvawakatsunga kuzadzisa zvinangwa zvako zvehuremu, unozviwanepi izvi zvinopisa mafuta? Kunyangwe makambani mazhinji anogona kuvimbisa kukupa iwe yakanakisa Synephrine, iwe unofanirwa kuve wakangwarira sezvo vamwe vanogona kukutengesera zvigadzirwa zvemanyepo. Tinokupa iwe kukosha kwemari yako nekukupa iwe neSynephrine zvekuwedzera izvo zvakachengeteka uye zvinoshanda. Kamwe iwe buy Synephrine kubva kwatiri, iwe unovimbiswa kuti iwe uchapisa mafuta uye kurasikirwa mafuta nekukurumidza uye zvachose.
Yedu yekuremerwa uremu inowedzera re njodzi-isina sezvo iri 100% yechisikigo isina zvakavanzika zvinowedzerwa. Raira iyo 'chishamiso' kurema upfu kubva kwatiri nhasi uye kurasikirwa neasina kudikanwa mapaundi pamwe nekunakirwa neSynephrine yekuvaka muviri mabhenefiti.
Bhuku reThe Health Professional's Guide to Dietary Supplements, rakanyorwa naShawn M. Talbott, Kerry Hughes, peji 13
Kufutisa: Epidemiology, Pathophysiology-uye Kudzivirira, Yechipiri Edition, yakarongedzwa naDebasis Bagchi, Harry G. Preuss, peji 538
Nutrlement Supplements in Sports and Exercise, yakanyorwa naMike Greenwood, Douglas Kalman, Jose Antonio, peji 231
Mashandiro anoita Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) kune anovaka muviri Orlistat Inoshanda Sei Seweya Wekurasikirwa Zvinodhaka?